Mmiri Equinox 2018: Kedu ihe ọ bụ na olee mgbe ihe a na-eme? Netwọk Mgbasa Ozi
Foto - Radiotierraviva.blogspot.com.es
Planetwa anyị anaghị anọ otu ebe n'ihe banyere Anyanwụ: ka ọ na-agba ya gburugburu ma na-agbagharị n'onwe ya, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ehihie na abalị, yana mgbanwe dị iche iche na-eme n'oge niile ka ọnwa na-aga.
Mana mmadu nwere mgbe o choro ichota ihe nile, ya bu kwa ubochi nke ichota nke enwere otutu uzo dika uzo n'abali dika equinox. Dabere na oge nke afọ a na-eme ya, anyị na-ekwu na ọ bụ mgbụsị akwụkwọ equinox ma ọ bụ mmiri equinox. N'oge a, anyị ga-ekwu maka nke ikpeazụ.
1 Kedu ihe bụ equinox?
1.1 Kedu mgbe ọ na-eme?
2 Kedu ihe bụ equinox nke asụsụ?
2.1 Ọ na-eme mgbe niile n'otu ụbọchị?
3 Kedu ihe na-eme n'oge ngwangwa vernal?
4 Olee mmetụta equinox nke March na-emetụta anyị?
Kedu ihe bụ equinox?
Ọ bụrụ na anyị ewere usoro ọmụmụ, equinox bụ okwu sitere na Latin nke ihe ọ pụtara bụ "abalị nhata". Ma mgbe anyị na-ekwu maka ihe ịtụnanya, nke a abụchaghị eziokwu n'ihi oke anyanwụ na njirimara nke mbara ụwa, nke na-ebute ndịiche n'ogologo ụbọchị na latitude dị iche iche. Ya mere, nkọwa nke okwu a bụ: oge nke afọ nke kpakpando nke eze dị n'ime ụgbọ elu nke eluigwe.
Na ya, ngbanwe mgbanwe kwa afọ nke oge na-apụta na mbara ụwa ọ bụla.
Kedu mgbe ọ na-eme?
Equinoxes na-eme n'etiti 20 na Machị 21 na n'etiti Septemba 22 na 23. N'ihe banyere ugwu ugwu, opupu ihe ubi na-amalite n'ụbọchị ndị nke ọnwa nke atọ, na ụbịa n'ụbọchị ndị ahụ nke Septemba; dị nnọọ na mpaghara ya na mpaghara ndịda.
Kedu ihe bụ equinox nke asụsụ?
Foto - Wikimedia / Navelegante
Oge opupu ihe ubi nke oge opupu ihe ubi bu oge kachasi nma n’ime afo. Ọ bụ oge anyị ga-ahapụ oge oyi ma anyị nwere ike ịnụ ụtọ okpomọkụ karịa nke ga-atọ ụtọ ma na-atọkwu ụtọ. Ma gịnị mere ọ na-eme? Kedu ihe nkọwa sayensị banyere ihe a?
Iji zaa ajụjụ a ọ dị mkpa ịnweta ụfọdụ ihe ọmụma banyere mbara igwe, nke ahụ bụkwa equinox ahụ dị vernal na-apụta mgbe Sun na-agabiga ebe mbụ nke Aries, nke bu ihe di na elu igwe ozo ebe eze kpakpando n'ile ya anya kwa ubochi site na ecliptic -maximum okirikiri nke mbara igwe nke n'egosiputa ihe Sun na-egosi n'oge otu afọ- site n'ebe ndịda ruo n'ebe ugwu na-akwanyere ụgbọelu ikuku.
Ihe nwere ike ịdị ntakịrị, n'ihi na isi okwu mbụ nke Aries, yana isi mmalite nke Libra - isi nke kpakpando gafere na equinox nke September 22-23 - adịghị ahụ na kpakpando ndị na-akpọ ha. n'ihi usoro ihe ịga nke ọma, nke bụ mmegharị ahụ nke sitere na ntụgharị nke ntụgharị nke ụwa. Kpọmkwem, isi ihe masịrị anyị oge a bụ ogo 8 site na ókèala ya na Aquarius.
Ọ na-eme mgbe niile n'otu ụbọchị?
Ee, n'ezie, ma ọ bụghị n'otu oge ahụ. N’ezie, n’afọ 2012 ka emere na Machị 20 na 05:14, na 2018 ọ ga-abụ na Machị 20 na 16:15.
Kedu ihe na-eme n'oge ngwangwa vernal?
Foto - Flickr / Dick Thomas Johnson
Na mgbakwunye na ihe anyị kwurula n'elu, n'ụbọchị ahụ na ụbọchị na-esote, ọtụtụ mba na-eme ememme mmiri ha. Ọ bụ oge pụrụ iche nke afọ nke a na - emeghachi kwa ọnwa iri na abụọ, ya mere ọ ga - abụ ngọpụ zuru oke iji nwee ọ enjoyụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ụfọdụ n’ime ihe ndị kachasị mkpa, lee ndepụta:
Japan: na mba Japan na-agba Hanami, nke bụ ememme iji lelee ma tụgharịa uche na ịma mma nke okooko osisi nke osisi cherry Japan ma ọ bụ sakuras.
China: pụtara kpọmkwem ụbọchị 104 ka ọnwa Septemba gbachara. N’ụbọchị ahụ, ha na-asọpụrụ ndị nna ochie.
Poland: Na Machị 21, ha na-eme ngagharị ebe enweghị enweghị sphinx nke chi nwanyị Marzanna, nke metụtara omume metụtara ọnwụ na nlọghachi nke okike.
Mexico: na Machị 21 ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ejiji ọcha iji gaa ebe dị iche iche mgbe ochie iji weghachi onwe ha.
Uruguay: na Satọde nke abụọ nke Ọktoba, njem njegharị nke ịnyịnya ndị a na-achọ mma nke ịnyịnya na-adọkpụ n'okporo ámá.
Olee mmetụta equinox nke March na-emetụta anyị?
Iji mechaa, aga m agwa gị otu equinox nke na-eme na Machị si emetụta anyị, ebe ọ na-eme ya n'ụzọ dị iche iche: N'ebe a na mbara ụwa anyị hụrụ n'anya, ihe ndị dị mkpa na-eme ụbọchị ahụ, kedu ihe:
N'ebe ugwu ugwu otu ụbọchị ga-amalite nke ga-abụ ọnwa isii.
Abalị nke ga-ewe ọnwa isii na-amalite na South Pole.
Oge opupu ihe ubi na-amalite na ugwu ugwu, nke a na-akpọ vernal ma ọ bụ vernal equinox.
Oge mgbụsị akwụkwọ na-amalite n'akụkụ ebe ndịda, nke a na-akpọ mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ.
Anyị nwere olile anya na ị ga-enwe afọ ojuju al.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mmiri equinox
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara hygrometers